November 18, 2016 – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
Posted on November 18, 2016 by bgoper
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဦး (ခ) ဦးတင်ဆန်းဦး သည် (၁၈. ၁၁. ၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်ကျောက်စရစ်ကျေးရွာအုပ်စု ပဲသောင်ကျေးရွာပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး စစ်တောင်းမြစ်ရေကာတာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအား မြို့နယ်ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှူးနှင့်အတူကြည်ရူခဲ့ပါသည် […]
သနပ်ပင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
သနပ်ပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကတိကဝတ်အာမခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစောညိုဝင်းသည် (၁၈.၁၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် သနပ်ပင်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ […]
ရွှေတောင်မြို့နယ်တွင် ဆည်မြောင်းများတူးရန်အတွက် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု
ရွှေတောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွန့်ဝေသည် (၁၈.၁၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူး ဦးသိန်းထွန်းအောင်နှင့်အတူ ဆည်မြောင်းများတူးရန်အတွက် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ […]
ပဲခူးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ အခမ်းအနား
Posted on November 18, 2016 (December 6, 2016) by bgoper
(၃.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉:ဝဝ)နာရီအချိန်၊ ပဲခူးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ အခမ်းအနားသို့ […]
Posted on November 18, 2016 (November 18, 2016) by bgoper
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်ဇင်သည် စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး ဦးသန်းဝင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဝင်များ၊ တိုင်းလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများ၊ ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီများနှင့်အတူ (၁၈.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ဇီးကုန်းမြို့နယ်ကျေးရွာမီးလင်းရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကြားနာခြင်းအခမ်းအနား(စတုတ္ထနေ့) ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား၍ လိုအပ်သည်များ မှာကြားခဲ့ပါသည်။ […]